Abahlalutyi bezeShishini beZiko loQeqesho lwaBaqalayo kunye noBuchule | IYO
Abahlalutyi bezeShishini beZiko loQeqesho lwaBaqalayo kunye noBuchule
Iprojekthi yoCwangciso noLawulo lweProjekthi
Ukuphuhliswa kweeNkcazo zeShishini
Inkqubo yoVavanyo lweSolution
Izindlela ezikhethileyo zokuba nguMcwaningi woShishino
1. Developer Software
2. Fumana iSatifikethi sokuHlola iShishini
Kuphi ukufumana iNkcazo yokuHlaba iBusiness
Abahlalutyi bamashishini baqaphela imiba, bawaphule imfuno, bajongane neqela leprojekthi, kwaye baqhelanise utshintsho kunye nokuqhuba ishishini. Ziyakwandisa kwaye zilungise iinkqubo zeshishini, umzekelo, isivuno, ukunyuka kwenzuzo kunye nabanye. Izisombululo abazinikeleyo zisekelwe kwizinto ezintsha. Inzala yabahlalutyi inokunyuka kuwo onke amaqela.
Iimfuno zifuna ubuchule obungakwazi ukufunda kwiziko lokuhlaziya i-shishini. I-degree kunye nekhosi yeengcali kumashishini-ahambelana nemida ikubeka ngokufanelekileyo ukubonisa umsebenzi. Nangona kunjalo, iinkqubo zesatifikethi zinikeza uqeqesho olubhekiselele ngakumbi. Ikhosi iyalela izinto ezifihlakeleyo zenkqubo yokuhlalutya kwaye zinika iziphumo zokufunda ezifanelekileyo.
Le khosi ibalulekile kwiingcali kunye neengcali ezifuna ukuhlala zibalulekile emsebenzini wokupapasha kwaye zongezelela abo bahamba ngqo esikolweni.
Inkqubo yokuhlalutya ishishini kukuba abo banomdla ngokunceda abathengi badibane iinjongo zoshishino. Iikholeji kunye neeyunivesithi zinika ikhosi kwiiofisi, umzekelo, ukuphucula ubuchule nokuqhubeka nokuqeqesha. Ixesha lesifundo esiqhelekileyo sesatifikethi sisifutshane nantoni yonyaka kwaye kufuneka ukuba ucinge nge-4 kwizifundo ze-10 kunye ne-electives.
Iingcamango zokufunda kwinkqubo yokuhlalutya ishishini zibandakanya:
Icandelo lomhlalutyi wezoshishino
Ukuqonda izidingo zombutho
Iingcamango eziphambili malunga nokuhlalutya ishishini
Ukuphuculwa kwengcamango yeprojekthi
Ukuphonononga nokunyamekela imiba echongiweyo kwishishini
Uhlalutyo lwezoqoqosho oluphambili lukuqhelanisa neengxenye ze bahlalutyi kunye nokuzinikela kwabo kwintlangano. Ingxelo yokuhlaziya ukuhlukanisa umsebenzi we-a uhlalutyo loshishino. Ezinye zeendlela zakho zisebenzisa izicwangciso ezisisiseko kunye neenkqubo zokunyamekela imiba yezo shishino, ukuvavanya ukufezekiswa kwesisombululo, kunye nokuhlola kukuza.
In cwangciso neprojekthi, uthatha iinkqubo ezisisiseko kunye nobuchule bokujongana neprojekthi ngokufanelekileyo. Ukongeza ngokwakho ukuphanda kwimeko. Amaphuzu kwikhosi:
Ukujongana nayo yonke iminqweno
Ukugqiba indleko, iimpahla eziphambili kunye neyidanga leprojekthi
Kufuneka kunye nokuphunyezwa kweprojekthi
IsiQiniso sokuQinisekisa iMfuno
Le khosi ibonisa iinkqubo zokuhanjiswa ukuphononongwa, iintlanganiso, ukuqokelela kunye nokurekhoda iimfuneko, umzekelo, ukubuthana kweziko, ukuqonda kunye nabanye. Ukwandisa ukubandakanya isandla ngokukhawuleza ngokwenza iimfuno zoshishino lweengxelo.
Kulo khosi, ufumanisa indlela yokwaphula ulwazi kunye nokukhangela isisombululo esichazela imiba yeqabane. Ukutya okungapheliyo kwesisombululo, uvavanya kwaye uvavanye iziphumo.
Ekugqibeleni, ufumanisa indlela ulungelelaniso ngayo. Le nkqubela ibandakanya ukuvavanya nokuvuma izicombululo zokuqinisekisa umgangatho kunye neziphumo ezivelisayo. Iisombululo kufuneka zihlangabezane neemfuno zabaxhasi kwaye ziphumeze iziphumo ezifunwayo. Uya kusebenza ekwenzeni iimvavanyo zokuqinisekisa izicwangciso ezicetywayo.
Zininzi iindlela ezinokukufikelela kwigama lohlalutya loshishino. Ingxaki yakho ingaba ngcono xa i-IT yakho nezobugcisa ziphezulu. Ukuqonda okungaqondakaliyo kweemarike kwongezwa kukubeka phambili. Ngaphandle kokufunda unako oku kunokukunceda ube ngumhlalutyi wezoshishino:
Abaphuhlisi beefowuni banolwazi lokumbiwa kweemigodi kunye nokuhlalutya, kunye nobuchule bolwalamano. Ukuphonononga uhlalutyo lwezoshishino kunye nokujoyina ulwazi lweprosoft software kukunceda uhlawule imali engenayo kwimisebenzi yokuhlalutya.
Bhalisa kwinkqubo yesicatshulwa sohlalutyo loshishino kwithuba elifanelekileyo lokuba ubambe isatifikethi seminyaka emine kwimimandla, umzekelo, i-HR, izikhokelo zeenkcukacha, ukugcinwa kweencwadi, kunye nezoshishino. Uza kuthatha ubuchule obubalulekileyo bokuthatha isifundo njengomhlalutyi wezoshishino.
Ukutshintsha imisebenzi emva kwexesha elibalulekileyo lokubandakanyeka kunye nezoshishino kunokubakhokelela ekukhuthazeni umsebenzi. Cinga uhlalutyo lwezoshishino ukufumana iziphumo kunye neziqinisekiso zakho ziya kuvela. Ngeke ukhuthaze amabhizinisi, ukongeza ngaphezu kokuphumelela.
Umgangatho oqhelekileyo weengxelo zokuhlalutya kwezoshishino ngolwazi oluyisiseko kunye nobuchule bokuphucula ifom yezoshishino. Le khosi ikuvumela ukuba udibanise uphinde ulungise ukuzilolonga kwezoshishino, ufumane iimfuno ezichanekileyo, udibanise ezinye iindlela ngokuphumelelayo, wenze amaxwebhu ngqo, kwaye uhlole iimfuneko phakathi kweprojekthi yobomi.
Iikholeji ezininzi zinikela ngekhosi ye-4 yeminyaka yeenkqubo zokuhlalutya zezocwangciso zezobugcisa. Eminye imibutho ye-IT yongeza iikhosi ezifanayo. I-Newnovative Technology Solutions yimeko ekhethekileyo kuba sele sinezifundo zokugqibela ze-Oracle Certification zezifundo zombini ohlalutyo olutsha kunye nolwazi.
Amashishini amaninzi adibanisa nabahlalutyi ukubanceda bahlengahlengise imeko. Ngoku, uhlalutyo loshishino siqwengatha iikhosi zezoshishino kwiikholeji nakwezinye iziseko zoqeqesho emhlabeni jikelele. Unokuthatha ikhosi ukusuka kwi-ITS kwakhona.
Uluphi Ulawulo loLawulo lweProjekthi?
I-PMP yeSatifikethi seMisebenzi yeMisebenzi